ထိုင်းအသင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲအပြီးမှာ မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ နေမင်း……. – EverBestMM
ထိုင်းအသင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲအပြီးမှာ မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ နေမင်း…….
နေမင်းကတော့ လက်ရှှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ အကြိမ်(၃၀)မြောက် SEA Games ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်အားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲစဉ်တွေမစခင်ကတည်းက ကစားသမားတွေအနားမှာနေကာ အင်တိုက်အားတိုက် ဝန်းရံအားပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးအားကစားမှာတော့ မြန်မာယူ(၂၂)အသင်းနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကတော့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ရောင်ခြည်တွေကို တစ်ဖန်ပြန်လည်နိုးကြားလာစေခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းရဲ့ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့ ထိုင်းအသင်းနဲ့အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာမပေးမှုကြောင့် ပွဲပြီးခါနီးမှ တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ ထိုင်းအသင်းကို ရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့ အားရကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ ဘောလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းကတော့ “ငါတို့ရှုံးတယ်…ဘာဖြစ်လဲ…တတိယရှိသေးတယ်…#အေး..မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးတာတော့ ငါ့ညီလေးတွေအတွက် ခံစားရတယ်” လို့သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တတိယဗိုလ်လုပွဲကိုတော့ အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်တာမို့ အကောင်းဆုံးကစားပြီး တတိယဆုရရှိနိုင်ဖို့ ပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါဦးနော်။
ေနမင္းကေတာ့ လက္ရွွိဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ အႀကိမ္(၃၀)ေျမာက္ SEA Games ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္အားေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ေတြမစခင္ကတည္းက ကစားသမားေတြအနားမွာေနကာ အင္တိုက္အားတိုက္ ဝန္းရံအားေပးခဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္အားေပးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ေဘာလုံးအားကစားမွာေတာ့ ျမန္မာယူ(၂၂)အသင္းနဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းကေတာ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္အထိတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ေမၽွာ္လင့္ေရာင္ျခည္ေတြကို တစ္ဖန္ျပန္လည္နိုးၾကားလာေစခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ကယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေဘာလုံးအသင္းရဲ့ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ထိုင္းအသင္းနဲ႔အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ကံတရားရဲ့မ်က္ႏွာသာမေပးမႈေၾကာင့္ ပြဲၿပီးခါနီးမွ တစ္ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ ထိုင္းအသင္းကို ရႈံးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
မရႈံးသင့္ဘဲ ရႈံးခဲ့ရတာေၾကာင့္ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အားရေက်နပ္မႈမရွိခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းရဲ့ ေဘာလုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနမင္းကေတာ့ “ငါတို႔ရႈံးတယ္…ဘာျဖစ္လဲ…တတိယရွိေသးတယ္…#ေအး..မရႈံးသင့္ဘဲ ရႈံးတာေတာ့ ငါ့ညီေလးေတြအတြက္ ခံစားရတယ္” လို႔သူ႔ရဲ့ေဖ့ဘြတ္ခ္အေကာင့္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယဗိုလ္လုပြဲကိုေတာ့ အိမ္ရွင္ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားရမွာျဖစ္တာမို႔ အေကာင္းဆုံးကစားၿပီး တတိယဆုရရွိနိုင္ဖို႔ ပရိသတ္ႀကီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္။